Soo dejisan PPSSPP 1.3.0.1 – Android – Vessoft
Qeybta: Cayaarta kale
PPSSPP – emulator multi-shaqo ee ciyaarta Console Sony PlayStation ah. Software wuxuu kuu ogol yahay in Radidiyaha kulamada caan ah sida GTA, Call of Duty, shirqoolka Caqiidada, FIFA, Final Fantasy, Daal iwm PPSSPP taageertaa shaqada si loo badbaadiyo kulan ee heer kasta, eegin kaydinta gudaha. Software ka kooban yahay tiro badan oo ah qalab reserved naqshadeynta, iyo sanqadha, gacanta oo kulan ku shabakada. Sidoo kale PPSSPP u saamaxaaya in ay u ordaan kulan la shuruudaha nidaamka sare, taas oo aan u shaqayn karo qalabka la waxqabadka nidaamka hooseeyo.
The set oo ah qalab loogu talagalay goobaha graphic
Taageerada ciyaarta ku ISO ama CSO qaabab ah
Habee furayaasha gacanta
Kartida ee ciyaarta network la ciyaartoyda kale
Faallo ku saabsan PPSSPP
PPSSPP Xirfadaha la xiriira
Dubsmash – barnaamij xiiso leh oo lagu duubo fiidiyowyada xiisaha leh ee ay weheliyaan wixii faylal maqal ah. Codsigu wuxuu leeyahay gabal-goyn ballaaran oo heeso caan ah, aflaan, iyo cajalado.